भोट ल्याउन नसकेपछि बाबुराम र उपेन्द्रको समाजवादी पार्टीको ज’मानत ज’फत ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/भोट ल्याउन नसकेपछि बाबुराम र उपेन्द्रको समाजवादी पार्टीको ज’मानत ज’फत !
भोट ल्याउन नसकेपछि बाबुराम र उपेन्द्रको समाजवादी पार्टीको ज’मानत ज’फत !
महोत्तरी जिल्लामा चार वटा विभिन्न पद चारै दलका पोल्टामा परेका छन् । उपनिर्वाचनमा जिल्लाको एक गाउँपालिका अध्यक्ष र तीन वडाध्यक्ष पदका लागि भएको उपनिर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टीे नेपाल र समाजवादी पार्टी एक एक पदमा निर्वाचित भएका छन् ।
अर्जुन क्षेत्रीलाई प’क्राउ गरी बयानका लागि उपस्थित गराउन प्रहरीलाई निर्देशन
बिहे चलिरहेका बेला बेहुलीले पूर्वप्रेमीलाई देखेपछि बिहे छाडेर हिँडिन्